‘ठगियौँ सर, क्यानाडा जाने सपनामा बर्बाद भयो ।’ यसरी !! – Complete Nepali News Portal
‘ठगियौँ सर, क्यानाडा जाने सपनामा बर्बाद भयो ।’ यसरी !!
June 3, 2017	339 Views
महानगरीय अपराध महाशाखाका एसपी श्याम ज्ञवालीको कार्यकक्षमा शुक्रबार दिउँसो दुई युवक हस्याङफस्याङ गर्दै प्रवेश गरे । एसपी ज्ञवालीले समस्या सोधेपछि उनीहरूले भने, ‘ठगियौँ सर, क्यानाडा जाने सपनामा बर्बाद भयौँ ।’ ती दुई युवकलाई क्यानाडामा मासिक २८ सय क्यानेडियन डलरको जागिर र मासिक ५ प्रतिशत बोनस दिने आश्वासन दिइएको थियो ।
क्यानाडाको पिआर (स्थायी बसोबास अनुमति) पनि मिलाउने विश्वास दिलाइएको थियो । क्यानेडियन पिआरको सपना बोकेर उनीहरू केही दिनअघि दिल्ली उडेका थिए । दिल्ली गएपछि दलालहरूको चक्करमा फसेर काठमाडौं फर्किएका उनीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उनीहरूमध्ये एकले १८ लाख र अर्काले दलाललाई १६ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । दलालहरूले धेरै सपना देखाएर आफूहरूलाई ठगेको उनीहरूले बताएका छन् ।
एसपी ज्ञवालीको कार्यकक्षमा दैनिक उनीहरूजस्तै युवाहरू क्यानाडाको सपनामा लाखौँ ठगिएर पुग्ने गरेका छन् । ‘केही वर्षअघि अमेरिका जान भनेपछि नेपालीहरू मरिहत्ते गर्थे, अहिले त्यस्तै अवस्था क्यानाडा जानका लागि छ,’ एसपी ज्ञवाली भन्छन्, ‘क्यानाडा जान भनेपछि आखा चिम्लिएर मान्छेहरूले पैसा फालेको देख्दा अचम्म लाग्छ । यसरी ठगिएको भन्दै हरेक दिन उजुरी आउने गरेको छ ।’ तुलनात्मक रूपमा भिसा केही सहज भएकाले क्यानाडा पठाउने भन्दै ठगी व्यापक भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
क्यनाडापछि जापान र युरोप
क्यानाडापछि जापानमा पठाइदिने भनेर ठगीका घटना धेरै रहेको एसपी श्याम ज्ञवालीले बताए । जापान जान लाखौँ बुझाएका बैंकक तथा भियतनाम पुगेर फर्कने गरेका छन् । त्यस्तै, युरोपियन मुलुक पठाइदिने भनेरसमेत ठगी हुने गरेको छ । आफूहरूको उच्च व्यक्तिहरूस“ग चिनजान रहेको र कार्यक्रममा सहभागी हुन भिसा लगाउने भनेर विश्वासमा पारी ठगी हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
समाजको बिकृतिप्रतिको यो तिखो प्रहारलाई सलाम छ (भिडियो सहित)